Nuqul ka sameynta: Hab-dhaqannada ugu Fiican ee looga Fogaado ama loo Saxo Macluumaadka Macaamilka ee Nuqullada ah | Martech Zone
Nuqul ka sameynta: Hababka ugufiican ee looga Fogaado ama loo Saxo Macluumaadka Macaamilka ee Nuqullada ah
Isniin, April 26, 2021 Isniin, April 26, 2021 Zara Ziad
Xogta nuqulku kaliya ma dhimayso saxnaanta fikradaha ganacsiga, laakiin waxay hoos u dhigeysaa tayada khibrada macaamiishaada sidoo kale. In kasta oo cawaaqibta xogta nuqulku ay la kulmayaan qof walba - maareeyayaasha IT-ga, adeegsadayaasha ganacsiga, falanqeeyayaasha xogta - waxay ku leedahay saamaynta ugu xun shirkadaha howlaha suuqgeynta. Maaddaama suuqleydu ay matalaan wax soo saarka shirkadda iyo adeegga ay u fidiso warshadaha, xogta liidata waxay si dhakhso leh u xumeyn kartaa sumcaddaada astaanta waxayna u horseedi kartaa gaarsiinta khibradaha macaamiisha xun. Macluumaadka isku-dhafan ee shirkadda CRM waxay u dhacdaa sababo kala duwan awgood.
Laga soo bilaabo qaladka aadanaha ilaa macaamiisha siinaya macluumaad wax yar ka duwan dhibco kala duwan waqtiga ku jira keydka ururada. Tusaale ahaan, macaamilku wuxuu ku qoraa magaciisa Jonathan Smith hal foom iyo Jon Smith midka kale. Caqabada waxaa uga sii daray kaydinta xogta. Badanaa way ku sii adkaanaysaa maamulayaasha inay la socdaan DB iyo sidoo kale inay la socdaan xogta la xidhiidha. Way sii adkaaneysaa si loo hubiyo in barnaamijka 'DB' uu ahaado mid sax ah ”.
Natik Ameen, Khabiir ku ah Suuq geynta Suuqgeynta Canz
Maqaalkan, waxaan ku eegi doonnaa noocyada kala duwan ee xogta nuqullada ah, iyo xoogaa xeelado waxtar leh oo ay suuqleydu u adeegsan karaan inay ka jaraan macluumaadka keydkooda shirkadda.
Noocyada Kala Duwan ee Macluumaadka Nuqullada ah
Macluumaadka nuqullada ah waxaa badanaa lagu sharraxaa inuu yahay nuqul asalka ah. Laakiin waxaa jira noocyo kala duwan oo xog ah oo nuqul ah oo ku daraya dhibkan dhibaatadan.
Nuqullada saxda ah ee isku ilo ah - Tani waxay dhacdaa marka diiwaanada laga helo hal xog laga soo wareejiyo ilo kale oo xog ah iyadoon la tixgelin wax farsamooyin isku habboon ama mid ah Tusaale ahaan wuxuu noqon karaa ka soo guurinta macluumaadka CRM ilaa qalab suuq geynta emaylka. Haddii macmiilkaagu uu ku qoran yahay joornaalkaaga, ka dib rikoodhkoodu wuxuu horeyba ugu jiraa aaladda suuq geynta emaylka, iyo ka wareejinta xogta CRM ilaa qalabka waxay abuuri doontaa nuqulo nuqul isku mid ah.
Nuqullada saxda ah ee ilo badan - Nuqulada saxda ah ee ilo badan ayaa badanaa soo baxa sababo la xiriira dadaallada keydinta xogta ee shirkadda. Ururradu waxay u muuqdaan inay diidaan waxqabadyada nadiifinta xogta, waxayna u nugul yihiin inay keydiyaan dhammaan nuqulada xogta ay gacanta ku hayaan. Tani waxay keeneysaa ilo kala jaad ah oo ay ku jiraan macluumaad nuqul ah.
Kala duwanaanshaha ku-beddelashada ilo badan - Nuqulada waxay ku jiri karaan macluumaad kala duwan sidoo kale. Tani waxay badanaa dhacdaa marka macaamiisha ay maraan isbeddelada magaca dambe, cinwaanka shaqada, shirkadda, cinwaanka emaylka, iwm. Maaddaama ay jiraan kala duwanaansho muuqda oo u dhexeeya diiwaannada hore iyo kuwa cusub, macluumaadka soo galaya waxaa loola dhaqmayaa sidii hay'ad cusub.
Nuqulo aan sax ahayn oo isku mid ah ama ilo dhowr ah - Nuqul aan sax ahayn waa marka qiimaha xogta macnaheedu yahay isla wax, laakiin waxaa lagu matalayaa qaabab kala duwan. Tusaale ahaan, magaca Dona Jane Ruth waxaa loo badbaadin karaa sidii Dona J. Ruth ama DJ Ruth. Dhammaan qiimayaasha xogta waxay matalayaan wax isku mid ah laakiin marka la barbar dhigo farsamooyinka iswaafajinta xogta ee fudud, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo aan toos ahayn.
Nuqul ka sameynta waxay noqon kartaa geedi socod aad u adag madaama macaamiisha iyo ganacsatadu badiyaa wax ka badalaan xogtooda xiriirka waqti kadib. Waxaa jira kala duwanaansho ku saabsan sida ay u galaan goob kasta oo xog ah - laga bilaabo magacooda, cinwaanka emaylka (emailka), cinwaanka la deggan yahay, cinwaanka ganacsiga, iwm.
Waa kuwan liistada qaababka ugu wanaagsan ee soo-saaridda xogta 5 ee suuqgeeyayaashu bilaabi karaan maanta.
Istaraatiijiyadda 1: Hubi Hubinta Xaqiijinta ee Gelinta Xogta
Waa inaad lahaataa kontoroollo xaqiijin oo adag oo ku saabsan dhammaan goobaha gelitaanka xogta. Tani waxay ku lug leedahay hubinta in xogta la gelinayo ay la jaanqaadayso nooca xogta loo baahan yahay, qaabka, iyo beenta u dhaxeysa kala duwanaanshaha la aqbali karo. Tani waxay tagi kartaa waddo dheer si looga dhigo xogtaada mid dhameystiran, ansax ah, oo sax ah. Intaas waxaa sii dheer, waa muhiim in habsami u socodka shaqadaada macluumaadka loo qoondeeyo oo keliya si loo abuuro diiwaanno cusub laakiin marka hore la raadiyo oo la helo haddii datasetku ku jiro diiwaan jira oo u dhigma midka imanaya. Xaaladaha noocaas ah, kaliya waxay heshaa oo cusbooneysiisaa, halkii ay ka abuuri lahayd rikoodh cusub. Shirkado badan ayaa isku darsaday jeegag macmiilka si ay ugu xalliyaan xogtooda nuqul sidoo kale.
Istaraatiijiyadda 2: Ku samee nuqulka adigoo adeegsanaya aalado otomaatig ah
Adeegso is-adeegid xogta barnaamijka soosaareynta kaa caawin kara aqoonsiga iyo nadiifinta diiwaanada nuqullada ah. Qalabkani wuu awoodaa jaangooyo xogta, si sax ah u hel iswaafajinta saxda ah iyo kuwa aan saxda ahayn, waxayna sidoo kale yareeyeen shaqada gacanta oo lagu eegay kumanaan saf oo xog ah. Hubso in qalabku uu taageero siinayo soo dejinta xogta laga helo ilo badan oo kala duwan sida xaashiyaha sare, xogta CRM, liisaska, iwm.
Istaraatiijiyadda 3: Isticmaal Farsamooyinka Nuqulaynta Gaarka ah ee Xog-Gaar ah
Waxay kuxirantahay nooca xogta, soo-saarid xogta waxaa loo sameeyaa si ka duwan. Suuqyayaashu waa inay taxaddar muujiyaan inta ay xoqinayaan xogta maxaa yeelay isla waxku wuxuu macnaheedu noqon karaa wax ka duwan sifooyinka xogta kala duwan. Tusaale ahaan, haddii laba xogood oo xog ah ay iswaafajiyaan cinwaanka emaylka, markaa waxaa jira ixtimaal sare oo ah inay yihiin labalaab. Laakiin haddii laba diiwaan ay isku mid ka noqdaan cinwaanka, markaa qasab maahan inay nuqul yihiin, maxaa yeelay laba shaqsi oo isku reer ah ayaa ku yeelan kara rukhsad gaar ah shirkaddaada. Markaa hubso inaad hirgeliso soo-saaridda xogta, isku-darka, iyo waxqabadyada sifaynta iyadoo la raacayo nooca xogta ay xog-ururinteedu ka kooban tahay.
Istaraatiijiyadda 4: Ku Hesho Diiwaanka Masterka Dahabiga ah iyadoo loo marayo kobcinta xogta
Marka aad go'aamiso liiska cayaaraha ka jira keydkaaga, waxaa muhiim ah in la falanqeeyo macluumaadkan ka hor inta aan la sameynin isku-darka xogta ama go'aan qaadashada. Haddii diiwaanno badan ay jiraan hal hay'ad oo qaarna ay matalaan macluumaad aan sax ahayn, markaa waxaa ugu wanaagsan in la nadiifiyo diiwaanadaas. Dhinaca kale, haddii nuqullada aan dhammeystirnayn, ka dib isku-dhafka xogta ayaa ah xulasho ka wanaagsan maadaama ay awood u siinayso kobcinta xogta, iyo diiwaanada la isku daray waxay ku dari karaan qiime dheeraad ah ganacsigaaga.
Si kastaba ha noqotee, suuqleydu waa inay ka shaqeeyaan sidii ay ku gaari lahaayeen hal aragti oo ku saabsan macluumaadka suuqgeynta, oo loo yaqaan diiwaanka Master dahabka.
Istaraatiijiyad 5: La soco Tilmaamayaasha Tayada Xogta
Dadaal socda oo lagu ilaalinayo xogtaada oo nadiif ah isla markaana aan la sii deyn karin ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu fulin karo istiraatiijiyadda dupuption data-kaaga. Qalab bixiya soo bandhigida xogta iyo qaababka maaraynta tayada ayaa halkan ka faa'iideysan kara. Waa lagama maarmaan in suuqleyda ay isha ku hayaan sida saxda ah, sax ah, dhameystiran, mid gaar ah, iyo iswaafaqsan xogta loo adeegsanayo howlaha suuqgeynta.
Maaddaama ururradu ay sii wadaan inay ku daraan codsiyada xogta geeddi-socodkooda ganacsi, waxay lagama maarmaan u noqotay suuq kasta inuu yeesho istiraatiijiyad nuqul-soo-saaridda xogta ah oo meesha taal. Hindisaha sida adeegsiga aaladaha kala-soocidda xogta, iyo qaabeynta habab shaqo oo ansax ah oo loogu talagalay abuurista iyo cusbooneysiinta diiwaanada xogta ayaa ah xeelado muhiim ah oo awood u siin kara tayada xogta lagu kalsoonaan karo ee ururkaaga.
Ku saabsan Salaanka Xogta
Jaranjaro Xog waa madal maaraynta tayada xogta ah oo ka caawisa shirkadaha nadaafadda, kala soocida, jaangoynta, soosaarida, soo bandhigida, iyo kobcinta xogtooda. Barnaamijkeena isbarbar dhiga xogta ee warshadeena wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho diiwaanada iswaafajinta, isku darida xogta, iyo ka saar wixii nuqul ah adoo adeegsanaya caqli madhan oo isku dhejisan iyo algorithms barashada mashiinka, iyadoon loo eegin meesha xogtaadu ku nooshahay iyo qaabkeeda.
Soodejiso Tijaabinta Bilaashka ah ee Software Software data Matching
Tags: wax ka qabashada jaangooyooyinkaaisirdoonka macmalsuuq geyn karaxogta macaamiishakala saarista xogtanadiifinta xogtakobcinta xogtajaranjarada xogtaiswaafajinta xogtaxog ururintajaangoynta xogtagoyntanuqulidnuqul xogta macaamiishau dhigma waalanbarashada mashiinkanatik Ameen
Zara Ziad waa falanqeeye suuqgeyn wax soo saar ah oo ku saabsan Data Ladder oo taariikh ku leh IT-ga. Iyadu waa qof jecel inay dejiso istiraatiijiyad nuxur leh oo hal-abuur leh oo muujinaysa arrimaha fayo-dhawrka xogta dhabta ah ee dunida ka jirta ee ay maanta la kulmaan ururo badan. Waxay soo saartaa waxyaabo si ay ula xiriirto xalalka, talooyinka, iyo dhaqannada ka caawin kara ganacsiyada inay hirgeliyaan oo ay ku guuleystaan ​​tayada xogta asaasiga ah ee howlaha sirdoonka ganacsigooda. Waxay ku dadaaleysaa inay abuurto waxyaabo loogu talagalay bartilmaameed ballaaran oo dhagaystayaal ah, oo ka kala socda shaqaalaha farsamada illaa dhammaadka adeegsadaha, iyo sidoo kale ka suuq-geynta guud ahaan barnaamijyada dhijitaalka ah.